Duqeyn lagu dilay Saraakiil iyo Maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab,(Magacyada Qaar Saraakiisha Shabaab ee la dilay). - Latest News Updates
Duqeyn lagu dilay Saraakiil iyo Maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab,(Magacyada Qaar Saraakiisha Shabaab ee la dilay).
Muqdisho-Waraka aan ka helayno Deegaanka Owdheegle ee Gobalka Sh/Hoose ayaa sheegaya in duqeyn diyaaradeed oo deegaankaasi ka dhacday lagu dilay qaar ka mid ah Saraakiisha Al-Shabaab.
Dagaalkaan oo ay ka qeyb qaateen Ciidamada Kumaandoska Soomaaliya iyo kuwa Maraykanka, waxaana lagu soo waramayaa in duqayn lagu dilay ku dhawaad 45-ka tirsan Al-Shabaab iyo saraakiil ka tirsan Al-Shabaab, sida ay xaqiijiyeen Saraakiil Danab.
Raga ka tirsan Al-Shabaab ee duqayntaasi lagu dilay ayay saraakiisha ciidamada Danab Magacyadoodaku sheegeen sidan: Abuu yuusuf Alsuuf oo la sheegay inuu ka soo jeedo dalka Lubnaan,Yaxye Aldhaalib oo heysta dhalashada dalka Sudan, iyo Abuu Xasan Xamsa oo Al-Shabaab kaga soo biirey Kooxda Xuutiyiinta ee ka dagaalanta gudaha Dalka Yaman.
Dhanka kale Madaxmed Ibraahim Barre,Guddoomiyaha Gobolka Sh/Hoose ayaa warbaahinta Qaranka u sheegay inuu Ciidanku ay bur-buriyeen goobihii ay Al-Shabaab ka soo maleegi jireen weerarrada iyo qaraxyada oo ku yaalla isla Degmada Aw-dheegle.